भिटामिन र खनिज एक व्यक्ति स्वस्थ र बलियो राख्न मद्दत। गर्भावस्था को समयमा, बच्चालाई प्राप्त पोषक मात्र आमाबाट। त्यसैले, एक स्थिति यस्तो मा एक महिला (दुई वा बढी बच्चाहरु को अपेक्षित जन्म विशेष गरी यदि) आवश्यक खतरा बाहिर शिशु गर्न धेरै पोषक लगिनेछ गर्न।
स्वस्थ खाना गर्भावस्था को समयमा सबै micronutrients संग शरीर भर्न हुनेछ। तर, यो बस फलाम पर्याप्त र फोलिक एसिड खाना बाट प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छ। उपयोगी उत्पादनहरु संग लिएको सकिन्छ मात्र विशेष भिटामिन, आमा र बच्चाको सुरक्षित अवस्थाको "हेरविचार"। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय अनुसन्धान संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्वास्थ्य र चिकित्सा को परिषद बाट वैज्ञानिकहरूले 1,000 घरपरिवारमा बुद्धि प्रदर्शन विश्लेषण सञ्चालन भएको थियो। सर्वेक्षण तिनीहरूले बुद्धि को स्तर ती बच्चाहरु जसको आमा गर्भावस्था आयोडिन अपर्याप्त समयमा लिए प्रकट गरिएको छ कम प्रमाणित गर्नुभयो।
यो केवल एक बच्चा छ खोज्नुभएको गर्ने महिला पनि prenatal भिटामिन लिएर लायक छन् भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। जो राम्रो वास्तविक विशेषज्ञहरु छ - यो सबै राम्ररी विश्लेषण हुनुपर्छ। यहाँ केही सुझावहरू छन्:
- आफ्नो डाक्टर-स्त्रीरोग विशेषज्ञ को सहमति बिना कुनै पनि पूरक लिन नगर्नुहोस्;
- बनाउनुहोस् को ट्याब्लेटको एक भिटामिन B6 छ भनेर निश्चित, यसको प्रयोग गर्भावस्था को पहिलो trimester मा वाकवाकी को भावना कम गर्न मद्दत गर्नेछ;
- एकदम फोलिक एसिड को सही राशि प्राप्त भ्रूण मा तन्त्रिका ट्यूब दोषहरु जोखिम कम गर्छ।
पारंपरिक multivitamins तुलनामा गर्भवती महिला लागि भिटामिन यो अवधिमा आवश्यक छन् भन्ने थप पोषक छ। यस उपस्थित चिकित्सक पनि औषधि पसल मा खरिद गर्न एक निर्धारण बिना गर्न सक्ने उत्पादनहरु हरेक महिलाको अद्वितीय सेट लागि prescribes। तिनीहरूले पर्याप्त मात्रा मा हो जो खाना बाट उपलब्ध पदार्थ संग आमा र बच्चा saturate ठूलो मद्दत छन्। उदाहरणका लागि, एक मात्र फलाम र क्याल्सियम पूरक खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईंले केही खाद्य पदार्थ एक शाकाहारी वा एलर्जी हो भने, आफ्नो डाक्टर तपाईंले केही खनिज लागि सल्लाह दिन्छन् हुनेछ।
राम्रो, वास्तविक व्यवसायीक छ: गर्भवती महिला लागि भिटामिन
गर्भावस्था आमा शरीर र पोषण आवश्यकता मा तीव्र परिवर्तनको एक समय छ। यी परिवर्तनहरू महिला बढ्दो भ्रूण र placenta को आवश्यकता पूरा गर्न अनुमति दिन्छ। आहार सिफारिसहरू gynecologists, micronutrients र पर्याप्त ताप सेवन को आवश्यक रकम कायम राख्ने बढ्दो भ्रूण हानि गर्न सक्छ कि भन्ने पदार्थ को रसिद परहेज केन्द्रित।
मा औषधि पसल, भिटामिन तयारी को विशाल छनोट। तिनीहरूलाई खरीद अघि तपाईंले आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्नुपर्छ। उसले विशेष तपाईं अनुकूल छन् जो ती additives चयन गर्न सल्लाह दिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोषक को नजन्मेको बच्चाको वृद्धि र विकास मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सूची विचार गर्नुहोस्:
- फोलिक एसिड ;
- ओमेगा3- फैटी एसिड;
- भिटामिन डी;
- भिटामिन B6।
फोलिक एसिड: चक्की वा उत्पादनहरु?
पानी घुलनशील भिटामिन फोलिक एसिड संश्लेषण र एमिनो एसिड, रातो रक्त, placenta र भ्रूण विकास उत्पादन को डीएनए चयापचय को मर्मतका अभिन्न भाग हो। यो धेरै खाद्य पदार्थ पाइन्छ, तर थप सजिलै सलाद र कालो currant, पालुङ्गो, साग, ब्रोकोली, जंगली गुलाब, सहिजन, Leek, बन्दागोभी को पात बाट अवशोषित।
फोलिक एसिड कमजोरीहरू र तन्त्रिका ट्यूब जन्म दोष को रोगहरु (हृदय दोष, छेद ओठ, आदि) को जोखिम कम गर्ने विश्वभरिबाट पत्यार पार्र्ने प्रमाण र अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गर्नुहोस्। त्यसैले, सबै विशेषज्ञहरु गर्भवती महिला र एक बच्चा गर्भ धारण गर्न योजना ती लागि पोषक तत्व खपत सुझाव दिन्छौं।
गर्भावस्था को 7-8 सप्ताह मा, तन्त्रिका ट्यूब बन्द, र यो अवधिमा, महिला सिर्फ आफ्नो अवस्था सिक्न थालेका छन्। यो pregnancies को 50% अनियोजित छन् भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। भ्रूण को दृश्य मा अवधारणा अघि एक स्वस्थ बच्चा गर्न फोलिक एसिड लिनुपर्छ।
400 G - Gynecologists गर्भवती महिला हरेक दिन 600 माइक्रोग्राम अप 12 सप्ताह, र गर्भ धारण गर्न, योजना ती उपभोग गर्न सुझाव दिन्छौं।
ओमेगा3- फैटी एसिड
ओमेगा3(एक पटक N-3 को रूप मा) - लामो श्रृंखला polyunsaturated फैटी एसिड, तिनीहरूले भ्रूण र यसको स्नायु प्रणालीको लागि धेरै उपयोगी हो किनभने जो गर्भवती महिला को लागि धेरै भिटामिन पूरक पाउन सकिन्छ, साथै मस्तिष्क विकास मा लाभकारी प्रभाव।
अखरोट, सोया तेल र rapeseed, अलसी: यी पोषक बोट मूल को खाद्य पदार्थ फेला छन्। ओमेगा3पनि फैटी माछा (सामन टुना, ट्राउट, सार्डिन, मैकेरल) र झिंगा मा निहित एउटा सानो रकम फेला छन्।
सर्वेक्षण अष्ट्रेलियन वैज्ञानिकहरू द्वारा आयोजित थिए 2,000 गर्भवती महिला को फलस्वरूप, यो माछा तेल (जो ओमेगा3को 800 मिलीग्राम समावेश) को प्रयोग पहिले जन्म को जोखिम कम गर्ने सिद्ध भएको छ।
यस्तै विश्लेषण नर्वे मा प्रदर्शन भएको थियो। गर्भवती महिला दिइएको विशेषज्ञहरु कड लिवर तेल (1000 मिलीग्राम ओमेगा-3)। फलस्वरूप, भ्रूण हात-आँखा समन्वय सुधार भएको छ। साथै, शोधकर्ताओं फैटी एसिड मातृ अवसाद को manifestations संख्या घटाउन भनेर फेला परेन।
अध्ययन पछि, विशेषज्ञहरु ट्याब्लेटको को रूप मा प्रयोग फैटी एसिड तपाईं एक दिन वा 200 मिलीग्राम एक हप्ताको2पटक माछा व्यञ्जन खान आवश्यक तर्क।
यो एक आवश्यक बोसो घुलनशील पोषक तत्व हो। यसबाहेक, र भिटामिन डी, र D2 छाला मा, मुख्यतया पराबैंगनी irradiation मार्फत संश्लेषित छन्। देशहरूमा सूर्य जहाँ छाला मा सीमित प्रभाव छ, मान्छे, घर भित्रका काम गर्ने तपाईं गढवाले दूध र चीज पिउन आवश्यक विशेष गरी ती पर्ज गरिएको छ। भिटामिन डी पनि तेल माछा र सीरम मा, अन्डा yolks मा पाइन्छ। पहिले जन्म, preeclampsia को जोखिम बढेको, सीजेरियन वितरण, intrahepatic cholestasis, Gestational मधुमेह, र अरूलाई: गर्भवती महिला निम्न समस्या अनुभव हुन सक्छ यसको कमी छ।
भिटामिन डी आमा, भ्रूण र नवजात शिशु बच्चा मा हड्डी ऊतक को स्वास्थ्य कायम राख्न लागि जिम्मेवार छ। को हृदय प्रणाली, को चिल्लो र skeletal मांसपेशी मा नकारात्मक प्रभाव, छाला क्यान्सर को जोखिम को अवरोध: गर्भावस्था को समयमा, यो पोषक तत्व को एक अधिशेष पनि प्रतिकूल परिणाम निम्त्याउँछ रूपमा, प्रति दिन माइक्रोग्राम कुनै थप 15 भन्दा लिनुपर्छ। यस मामला मा, यो सूर्य रहन एक लामो समय को लागि गर्भवती महिला सिफारिश छैन।
यो रातो रक्त र अक्सिजन आवश्यकता, utero-placental परिसंचरण को normalization को आम मा वृद्धि निर्धारण किनभने गर्भावस्था को समयमा फलाम को पर्याप्त सेवन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मातृ रक्तअल्पता पहिले जन्म, भ्रूण को र निराशा गर्न अचानक मृत्यु जान्छ। त्यसैले, सबै gynecologists गर्भवती र रगत परीक्षण हेमोग्लोबिन राम्ररी स्तर अनुगमन गर्न सुझाव।
प्रति दिन 27 मिलीग्राम - यो गर्भवती महिला को लागि फलाम को सर्वोत्कृष्ट दर छ, र फलाम कमी रक्तअल्पता मा - 60-80 मिलीग्राम, जो विशेष भिटामिन लिएर प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफ्नो प्रभाव फलाम पूरकता आमा कुनै हानिकारक प्रभाव छ र भ्रूण छैन भनेर पाएका छन् जो वैज्ञानिकहरू द्वारा विश्लेषण गरिएको छ। केही अवस्थामा, कब्जियत हुन सक्छ। यसलाई भिटामिन सी रगतमा फलाम को अवशोषण सुधार भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ।
यो पोषक तत्व - prenatal भिटामिन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संघटक। आखिर, यो भ्रूण कंकाल, आफ्नो दाँत, हृदय, मांसपेशीमा र स्नायु प्रणालीको सामान्य विकास निर्धारण गर्छ। त्यसैले, आमा दैनिक क्याल्सियम को 1000 मिलीग्राम खपत गर्नुपर्छ। यो पनि आफ्नो गर्भवती शरीरलाई को हड्डी बलियो बनाउन मदत गर्नेछ। भ्रूण थप क्याल्सियम अवशोषित गर्न प्रयास गर्दा यी लागूपदार्थ तेस्रो trimester, विशेष महत्त्वपूर्ण छन्।
यो सूक्ष्म पोषकतत्व को उत्कृष्ट स्रोतहरू दूध, पनीर, दही, ब्रोकोली र बन्दागोभी, सुन्तला रस, सुकेको फल (नेभारा, खुबानी), रोटी, बादाम, टोफु (सोया सेम देखि तरकारी प्रोटिन) मानिन्छ।
एक गर्भवती महिला पर्याप्त क्याल्सियम उपभोग गर्दैन भने, भ्रूण यो आमा को हड्डी बाट लाग्छ। को musculoskeletal प्रणाली, osteoporosis, भंगुर हड्डी उल्लङ्घनको -, नकारात्मक परिणाम यो नेतृत्व गर्नेछन् तिनीहरूलाई बीच।
यो एक खनिज थाइरोइड हर्मोन उत्पादन गर्न मानव शरीर द्वारा आवश्यक छ। गर्भावस्था को समयमा, महिला आयोडिन लाभदायक मस्तिष्क र बच्चाको स्नायु प्रणाली विकास गर्न मद्दत गर्न लिनु आवश्यक छ। दैनिक रकम - 220 माइक्रोग्राम। सबै भिटामिन समावेश आयोडिन, त्यसैले ध्यान दिएर आफ्नो खरिद तयारी यसको उपलब्धता जाँच गर्नुहोस्।
माछा, पनीर, दूध, दही, सम्पूर्ण अन्न रोटी,: आफ्नो स्रोतबाट निम्न उत्पादनहरु हुन मानिन्छ नुन, फैटी माछा।
यसलाई अष्ट्रेलिया मा रोटी उत्पादकहरु 2009 देखि यसको उत्पादन iodized नुन थप्न बाध्य छन् भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। यो गर्भवती महिला र यो देश को हरेक नागरिक दैनिक खपत कि पदार्थ को बारेमा 54 G तथ्यलाई गर्न पुगे। त्यसैले जनसंख्याको रुग्णता को स्तर जोडले रोकियो।
सम्झना: गम्भीर आयोडिन कमी मानव शरीर मा मस्तिष्क को भागहरु गर्न क्षति को मुख्य कारण हो!
यो पदार्थ प्रयोग बिहान वाकवाकी र उल्टी को अवस्थामा कम गर्न गर्भवती महिला लागि सिफारिस गरिएको छ। दैनिक आदर्श - 1.9 मिलीग्राम।
भिटामिन B6 को मुख्य स्रोत अदुवा छ। तिनीहरूले गर्भवती महिला को लागि निर्दिष्ट गरिएको छैन देखि गर्न सकिन्छ वितरण दर, यो ट्रेस तत्व को उत्पादनहरु छनौट सावधान रहनुहोस्। सम्झना: प्रति दिन अदुवा को सुरक्षित रकम 100 मिलीग्राम छ।
गर्भवती महिलाका लागि भिटामिन को र संरचना तत्व समावेश गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै:
- भिटामिन ए - एक दैनिक खपत दर - 10,000 IU। यो विषाक्त हुन सक्छ। को safest स्रोत - बिटा-carotene।
- जिंक - दिन 11 मिलीग्राम भन्दा कुनै लाग्न सक्छ। यो खनिज राम्रो छ आमा र भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रणाली समर्थन गर्दछ।
- कपर - 0.9 मिलीग्राम। मानव शरीर रक्त को गठन को लागि यो ट्रेस तत्व प्रयोग गर्दछ, र पनि एक स्वस्थ स्नायु प्रणाली कायम गर्न।
- भिटामिन सी - 85 मिलीग्राम - प्रति दिन खपत दर। यो एक उपयोगी पदार्थ विशेष गरी गर्भावस्था को समयमा पूर्ण फलाम अवशोषित र प्रतिरक्षा प्रणाली कायम राख्ने मदत गर्छ छ। भिटामिन ए को overabundance विकासशील भ्रूण हानि गर्न सक्छ।
- गर्भवती महिला को लागि अन्य भिटामिन। जो राम्रो छ? , Riboflavin, भिटामिन ई (12 मिलीग्राम / दिन।), Thiamine (1.2 मिलीग्राम) (1.2 मिलीग्राम) niacin (14 मिलीग्राम), भिटामिन बी 12 (2.2 मिलीग्राम): अतिथि विशेषज्ञहरु तपाईं आवश्यक खनिज चयन गर्न हुनेछ साथै फ्लोरिन, म्याग्नेसियम, बायोटिन, फस्फोरस रूपमा।
यो केवल आमा र बच्चाको पोषण स्रोत, तर पनि विकास भ्रूण को सामान्य वृद्धि गर्न प्रमुख हुनेछ देखि छैन गर्भावस्था को समयमा एक स्वस्थ आहार, सर्व महत्व छ। यसको संगठन सबै सिद्धान्तहरू यसलाई आफ्नो स्त्रीरोग विशेषज्ञ संग छलफल गर्न आवश्यक छ।
निस्सन्देह, हरेक गर्भवती महिला अक्सर भोक लाग्छ। तर निकट भविष्यमा दुई वा triplet पैदा हुनेछ भने पनि, दुई को लागि खान छैन। यो आमा को स्वास्थ्य गर्न हानिकारक छ। तपाईं बस खाना उपयोगी भिटामिन र खनिज प्राप्त गर्न, आहार विविधता गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, एक ट्रेस तत्व भ्रूण को विकास को लागि महत्वपूर्ण फोलिक एसिड छ। ट्याब्लेटको ताजा साग र सलाद रूपमा (तिनीहरूले पदार्थ को पर्याप्त रकम समावेश), लिन त सुखद छैन।
अनाज र अनाज
यी उत्पादनहरू शरीर लागि ऊर्जा पहिलो-वर्ग स्रोतहरू छन्। सारा अनाज देखि रोटी फलाम फाइबर, र धेरै भिटामिन र खनिज आमा र बच्चाको लागि आवश्यक समावेश गर्दछ। अनाज फोलिक एसिड को शरीर सार्थक र उपयोगी तत्व पहिल्याउन।
उत्पादनहरु को लागि, हेर, जो को भाग रूपमा - सारा अनाज। उदाहरणका लागि, खैरो वा जंगली चामल, पास्ता, जौ, सेतो रोटी, अनाज लागि।
तरकारी र फल
गर्भवती महिलाका लागि उपयोगी फल दैनिक आहार मा एक विशेष स्थान कब्जा गर्नुपर्छ। ती दुबै आमा र बच्चा महत्त्वपूर्ण पोषक, यस्तो बिटा-carotene रूपमा (, कक्षहरू र भ्रूण को Tissues को विकास मा मद्दत गर्छ आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली को गठन को लागि जग कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग), भिटामिन सी, फोलिक एसिड र अरूलाई प्रदान गर्नुहोस्।
खुबानी, चेरी, अंगूर, स्याउ, kiwi, नाशपाती, स्ट्रबेरी, खरबुजा, ब्लूबेरी, केले र अनार: गर्भावस्था को समयमा यस्तो फल प्रयोग गर्न राम्रो छ। तिनीहरूले मात्र भिटामिन संग आमा र बच्चा अर्थपूर्ण छैन, तर पनि यस्तो कब्जियत र बवासीर गठन रूपमा समस्या जोगिन मदत।
गर्भवती महिलाका लागि तरकारी धेरै क्यालोरी समावेश गर्दैन ऊर्जा, खनिज र फाइबर, एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। तिनीहरूले प्रत्येक भोजन को एक कोर भाग बन्न गर्नुपर्छ। यो रूपमा ताजा तरकारी र सुखा हुन सक्छ।
आलु, स्क्वास, टमाटर, खीरे, खुर्सानी, बन्दागोभी, मशरूम, गाजर, कद्दू, पालुङ्गो क्याल्सियम, फोलिक एसिड, भिटामिन सी, फलाम, भिटामिन ए, बिटा-carotene र फाइबर समावेश गर्दछ। प्रयोग गर्नु अघि, राम्ररी सबै उत्पादनहरु धुन।
मासु, माछा, अन्डा र फलियां
यो समूहको उत्पादन प्रोटिन र विभिन्न भिटामिन र फलाम, जो विशेष दोस्रो र तेस्रो trimesters मा, नजन्मेको बच्चाको विकास महत्त्वपूर्ण तत्व हो धेरै समावेश गर्दछ।
गर्भवती महिलाका लागि मासु, को पाठ्यक्रम, धेरै उपयोगी। पोर्क, पाठो, मासु, चिकन र टर्की प्रोटिन र भिटामिन बी 12 को मुख्य स्रोतहरु हुन्। तर यी उत्पादनहरूमा जो रगत कोलेस्ट्रल स्तर हुर्काउन सक्छन् संतृप्त बोसो, धेरै समावेश गर्दछ। तसर्थ, भाँडा स्वस्थ रहन तरकारी संग मासु संयोजन गर्न आवश्यक छ।
गर्भवती महिलाका लागि रातो माछा बच्चाको मस्तिष्क विकास गर्न लाभदायी छन् जो प्रोटिन र ओमेगा3फैटी एसिड, संग शरीर अर्थपूर्ण बनाउन मद्दत गर्छ। पारा माछा उच्च (swordfish, सार्क, राजा मैकेरल) जोगिन।
भ्रूण को सामान्य विकासको लागि अत्यावश्यक micronutrients एक नट प्रयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ। किनभने यो फलाम, भिटामिन सी, प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन ई समावेश गर्भवती चाहेको उत्पादनको लागि आहार छ
बच्चाको आशा को समयमा आहार, र अन्डा समावेश गर्नुपर्छ। तिनीहरूले सेलेनियम मा धनी छन्, जस्ता, भिटामिन ए, डी, बी कच्चा वा आंशिक पकाएको अन्डा, यो पनि बच्चा गर्न जान साल्मोनेला रोग को जोखिम वृद्धि हुनेछ खान नगर्नुहोस्।
दूध, पनीर, दही, पनीर मा क्याल्सियम छ भेटिएन, बच्चा को हड्डी र दाँत को विकास मा मद्दत गर्छ। र भिटामिन डी र प्रोटिन आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुनेछ।
गर्भवती महिलाका लागि दूध पोषक र खनिज स्रोत छ। नैदानिक अध्ययन अनुसार, यसको प्रयोगमा सकारात्मक आमा र भ्रूण को स्वास्थ्य असर गर्छ। यो एक दिन3कप पिउन सिफारिस गरिएको छ।
क्याल्सियम, प्रोटिन र भिटामिन डी को राम्रो स्रोत पनीर छ। गर्भवती महिलाका लागि यो अबेर उत्पादन को खपत बच्न ध्यान चयन गर्न आवश्यक छ।
एक गर्भवती महिला र भ्रूण लागि आवश्यक भिटामिन र खनिज प्राप्त गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो - फलस्वरूप, हामी एक स्वस्थ आहार भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। दुग्ध र मासु उत्पादन, फलफूल र तरकारी, माछा र सारा अनाज को आहार मा समावेश, तपाईं बच्चा को सामान्य विकास र वृद्धि को हेरविचार। केही अवस्थामा, तपाईं फरक उत्पादनहरु एलर्जी प्रतिक्रिया अनुभव हुन सक्छ। यो अन्त गर्न, विशेषज्ञहरु खाने र अप आमाको शरीर मा पोषक सम्पूर्ण कमी बनाउन भिटामिन सुझाव दिन्छौं। यो लेख पढ्ने पछि, तपाईं सजिलै prenatal भिटामिन चयन गर्न सक्नुहुन्छ (विशेषज्ञहरु केही राम्रो प्रतिक्रियाहरू शीघ्र)। किनभने खम्बा मा, responsibly यो मुद्दा जाने - र आफ्नो स्वास्थ्य, र आफ्नो भविष्य बच्चा, यो जानिन्छ - सबैभन्दा मूल्यवान् कुरा एक मानिस हुन सक्छ।
कसरी धूम्रपान गर्भावस्था को समयमा बच्चा असर
के तपाईं गर्भावस्था को समयमा दुखेको दाहिने तिर भने के गर्नुपर्छ?
म गर्भावस्था को समयमा एक marshmallow (सिरप) लिन सक्छ? प्रयोगको लागि निर्देशन
गर्भावस्था को समयमा खैरो छुट्टी - आदर्श वा विकृति?
प्रारम्भिक बिहान रोग: यो लडाइँ कसरी
तपाईंको जन्मदिनको एक छोटो बधाई छ कि तपाईले प्रायः आफ्नो चाहानुहुन्छ बताउनको लागि एक राम्रो तरिका हो!
Lego घर। Lego घर "Maynkraft"
संकेत विकिरण र आगो जोखिम को चेतावनी। कि खतरा के चिन्ह मतलब?
दूल्हा गर्न दुलही देखि एक विवाह उपहार कसरी चयन गर्न
ठूलो आकार को ओडेसा किन्नुहोस वस्त्र जहाँ
जिक्रोन - यो के हो? पत्थर को विशेषता प्रयोग